အိမ်မှာပဲ ‌အေး‌အေး‌ဆေး‌ဆေး‌ Snail Wish Cream ‌လေးနဲ့ Skin Care ရင်း COVID 19 ပျံ့ပွားမှုကို ကာကွယ်ကြမယ်‌နော်. Keep Calm, Stay Home and Skincare !!! Snail Wish Cream 50g တစ်ဘူး ၂၉၅၀၀ ကျပ်. Focus Beauty Agent များထံ မှာယူနိုင်ပါသည်.
အိမ်မှာပဲ ‌အေး‌အေး‌ဆေး‌ဆေး‌ Snail Wish Cream ‌လေးနဲ့ Skin Care ရင်း COVID 19 ပျံ့ပွားမှုကို ကာကွယ်ကြမယ်‌နော်. Keep Calm, Stay Home and Skincare !!! Snail Wish Cream 50g တစ်ဘူး ၂၉၅၀၀ ကျပ်. Focus Beauty Agent များထံ မှာယူနိုင်ပါသည်. #SnailWish #TheBestQuality 09454549089 m.me/NewSkiinMyamar
😍ကော်ဖီကြိုက်တဲ့မမရဲ့အသဲစွဲလေး😘 ကော်ဖီပူပူလေးတစ်ခွက် ‌သောက်လိုက်ခြင်းက သင့် စိတ်တွေကို ကြည်လင်လန်းဆန်းလာ‌စေသလိုပဲ BS Coffee Soap ‌လေးနဲ့ ‌ရေချိုးလိုက်ခြင်းက သင့်အသားအရေကို ကြည်လင် လန်းဆန်းအင်အားပြည့်၀လာ‌စေပါတယ်. Better Skin > Better Health > Better Life Better Skin Coffee Scrub Soap 120g တစ်တုံး ၄၅၀၀ ကျပ်. Focus Beauty Agent များထံ မှာယူနိုင်ပါပြီ. 09454549089 #BetterSkinSoap m.me/NewSkiinMyamar
🍋Garnier Light Complete Vitamin C Super Essence🍋 🍋တင်းတိပ် အမည်းစက်များ လျင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်းလိုသူ၊ အသား အရောင် မညီညာမှုများကြောင့် စိတ်ညစ်နေသူများအတွက် အထိရောက် ဆုံး ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးမယ့် Super Essence ဖြစ်သည်. Vitamin C အဆ ၃၀ ပိုမိုပါ၀င်ပြီး Japanese Yuzu Lemon ကို အခြေခံထုတ်လုပ် ထားတာ ကြောင့် သင့်အသားအရေကို အမြန်ဆုံး ဖြူ၀င်းလာစေပြီး ၀က်ခြံအမာရွတ် များကိုလည်း လျင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်းစေသည်. 🍋အသားအရေအတွင်း လျင်မြန်စွာ စိမ့်၀င်နိုင်ပြီး စေးကပ်ခြင်းလုံး၀မရှိပါ. အသားအရေမည်းညစ်ခြင်းကို ၇ ရက်အတွင်း ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ သက်သာလာစေသည်. (နေလောင်ခံတစ်ခုခုဖြင့်တွဲဖက်အသုံးပြုပါက ပိုမို ထိရောက်သည်). စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများအရ အမည်းစက်များကို ၄ ပတ် အတွင်း ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ မှေးမှိန်သွားစေသည်. 🍋အရေပြား စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပြီး ဖြစ်သောကြောင့် အသား အရေ အမျိုးအစားအားလုံး သုံးစွဲနိုင်ပါသည်. 30ml တစ်ဘူး ၁၂၀၀၀ ကျပ်. #GarnierVitCSuperEssence #ပပ၀တီSkin 09454549089
Ma Thae Ei San
ပြစ်မျိုးမဲ့မထင် လှချင်တယ်ဟုတ် အဲ့ ဆုတောင်းလေးတွေ ပြည့်စေဖို့ Snail လိမ်းကြစို့နော် Snail Mucus ကအရေပြားအစိုဓာတ်ကို အပြည့်အဝ ဖြည့်တင်းပေးတော့ မွဲမွဲခြောက်မျက်နှာ မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ အရည်သွေးမြင့် Vita Collagen အပြည့်အဝပါဝင်တာကြောင့် ရေရှည်အသုံးပြုမယ်ဆို အသားအရေစိုပြေပြီးတင်းရင်း‌ ချောမွေ့မှု နုပျိုစေအုံးမှာပါ အဆင့်မြင့်ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေကအမည်းစက် ဝက်ခြံအမာရွတ် နေလောင်အမဲကွက်တွေပျောက်ပြီး အရေပြားအိုမင်းခြင်းကိုလဲ ကာကွယ်ပေးတော့ အတွေးမမှားနဲ့တော့နော် Crd 🌟 star5g 3500 ( အစမ်းသုံး ) 50 g 29500 ( တစ်ဝကြီးနဲ့ အကြာကြီးသုံး ) 09960130030 m.me/NewSkiinMyamar
မျက်နှာ လှလှ လေး မှာ အရေးအကြောင်းတွေ ပေါ်နေလား တင်းတိပ် မှဲ့ခြောက် အမဲစက် တွေကြောင့် စိတ်ညစ်နေလား ဘာမှ ပူပန်နေစရာ မလိုဘူးနော် 🐌Snail wish ရှိတယ်နော် ပုံမှန်လိမ်းပေးခြင်းဖြင့် အရေးအကြောင်း တင်းတိပ် မှဲ့ခြောက် အမဲစက် တွေတဖြည်းဖြည်း လျော့ပါလားပြီး မျက်နှာလေး က ဖြူဝင်း နုဖတ်နေမှာနော်😚😚 🐌day / night cream အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည် 🐌boy & girl အသုံးပြု နိုင်ပါသည် 🐌Snail wish က သင့်ရဲ့ အလှတရားကို ပိုမို ပေါ်လွင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနေပြီနော် ***Snail wish ဗူး နဲ့ New skiin အထုပ်အာနိသင် အတူတူပါဘဲရှင်*** Snail wish ဗူး ....29500 ks New skiin အထုပ် ...3500 ks မှာယူလိုပါက Ph 09-454549089 m.me/NewSkiinMyamar
New Skiin Whitening Selfie Face Mask ကို သုံးစွဲသင့်သူများ ၁. ရာသီဥတုနှင့် ပတ်၀န်းကျင်ကြောင့် အသားအရေ ခြောက်သွေ့သူများ ၂. တင်းတိပ်၊ အမည်းစက်နှင့် အသားအရောင် မညီညာသူများ ၃. ဖိစီးမှုများကြောင့် အရေပြားပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပြီး ထိုင်းမှိုင်းနေသူများ ၄. Glow and Glass Skin လိုချင်သူများ ၅. အသားဖြူ၀င်းပြီး အစိုဓါတ်ထိန်းလိုသူများ New Skiin Face Mask ၅ ချပ်ပါ တစ်ဘူး ၁၅၀၀၀ ကျပ်. Crd 09454549089
အသားကို ချက်ချင်းဖြူ၀င်းစေတယ်ဆိုလို့ အသားအရေထိခိုက်မှာ စိုးရိမ်သြားလား စိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူးနော်။ အသားအရေကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေတဲ့ Mercury တွေ Steriod တွေလုံး၀မပါ၀င်ပါဘူး။ အသားအရောင်ကို Coverage နဲ့ဖြူ၀င်းစေတာဖြစ်လို့ ချွတ်ဆေးတွေ ပါမှာလည်း မကြောက်ပါနဲ့နော်။ Coverage ကလည်း ရေစိုခံလုပ်ထားပေးလို့ ရေစိုမှာလည်း ကြောက်စရာမလိုဘူးနော်။ သင်္ကြန်အတွက်ဆိုရင်တော့ ကွက်တိပဲပေါ့။ Cream အရောင်လေးကိုက ဖြူစင်၀င်းအိပြီး ဘာ Chemical ရဲ့ အရောင်အဆင်း အနံ့အသက်မရှိတာ လက်တွေ့သုံးဖူးသူတွေ အသိပါ။ ဒါ့အပြင် အေရျပားကို ထိခိုက်စေတဲ့ Paraben, Mineral Oil, Benzophenone, Alcohol, Phenoxyethanol, Synthetic Perfume မ်ား လုံး၀မပါ၀င်ပါဘူးနော်။ ဒါကြောင့် အန္တရာယ်ကင်းကင်း ဖြူ၀င်းလှပစေဖို့ Snail Wish Whitening Cream ကို အသုံးပြုကြပါစို့ 50g-29500 5g-3500 09454549089 #SnailWishWhiteningCream
First Page « 176 177 178 » Last Page